Ngaba i-agile ingaphumelela ngaphandle kovavanyo oluzenzekelayo?
Eyona Agile Ngaba i-Agile ingaphumelela ngaphandle kovavanyo oluzenzekelayo?
Ngaba i-Agile ingaphumelela ngaphandle kovavanyo oluzenzekelayo?
Ngaba uvavanyo oluzenzekelayo luyimfuneko ngokwenene kwiiprojekthi ze-agile? Ngaba singaba buthathaka ngaphandle kovavanyo oluzenzekelayo?
Xa sithetha ngovavanyo oluzenzekelayo, kufuneka sazi ukuba loluphi ungqimba (iyunithi, i-API, i-UI) esithetha ngalo.
Ndisebenze kwimibutho emininzi ebibuthathaka, kodwa imeko yovavanyo oluzenzekelayo kuwo onke amanqwanqwa ibihlwempuzekile kwaye ingasebenzi kangangokuba bekufana nokungabikho, i-YET, bekhupha isoftware rhoqo kwiiveki ezimbini kwimveliso ngaphandle kwengxaki enkulu.
Anditsho ukuba uvavanyo oluzenzekelayo yinkcitha xesha, kodwa ndibabonile abantu bekhupha isoftware ngokuvavanya nje ngesandla.
Nangona kunjalo, ingxaki yokungabinazo iimvavanyo ezizenzekelayo kukuba naphi na xa ufuna ukukhupha isoftware kwimveliso uyayikhulula ngokoyika kwaye ungazithembi ukuba isoftware yomelele, kuba kuninzi kuphela onokukuvavanya ngesandla.
Ndingathi, ufuna iimvavanyo ezizenzekelayo zeyunithi kunye novavanyo oluzenzekelayo / uvavanyo lwe-api, kodwa mhlawumbi kungafuneki ukuba ube neseti epheleleyo yovavanyo oluzenzekelayo lokugqibela ukuya kuthi ga esiphelweni nge-UI, njengoko behamba kancinci ukubaleka kwaye kubiza kakhulu ukugcina.
Ke, ukugqiba, uvavanyo oluzenzekelayo lunceda iiprojekthi ezi-agile ukuhambisa ikhowudi esemgangathweni ngokujonga ngokuqhubekayo kunye nokubonelela ngengxelo ekhawulezileyo, ke umntu angathi yinto ebaluleke kakhulu kwiiprojekthi ze-agile, nangona kunjalo, ibonelela ngexabiso xa iqela liphela linoxanduva lovavanyo oomatshini abazisebenzelayo kwaye iimvavanyo zizenzekelayo kumgangatho weyunithi kunye ne-API.
Uvavanyo kwi-UI kufuneka lujonge kuphela uhambo lomsebenzisi endaweni yokuqinisekisa ukusebenza kwayo yonke into.
gizmowatch vs gizmo ukubukela 2
uthotho lweapile lokubukela imibala emi-6
Kutheni le nto ufuna ukuZenzekelayo kuvavanyo?
I-OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10 +: ukuyihlela ngaphandle
I-Apple ifuna ukulungisa lo mbandela we-iOS kwangoko
Ngaba ubusazi-ukususa ifowuni yakho kunye ne-apos; ibhetri kuphela kwendlela eqinisekileyo yokuthintela ukuba ingalandelelwa
I-Apple Watch Series 4 ijongana ne-B & H yeVidiyo yeVidiyo ngaphandle kwenkxaso yeselula
I-Costco ine-Apple Watch Series 5 kwintengiso
Ngaba kulo nyaka & iiapos 5G s 13 iimodeli ziya kujongeka njengokuhanjiswa kule vidiyo?